I-Fuchsia OS isiqalile ukukhipha amadivayisi we-Nest Hub | Kusuka kuLinux
UPetr Hosek, Umholi wethimba le-Google obhekene nezinhlelo zokwakha, abahlanganisi namathuluzi wokuthuthukisa muva nje wethule idivayisi yokuqala ezothunyelwa ngohlelo lokusebenza lwe-Fuchsia. I-firmware esekwe ku-fuchsia izoqala ukuthunyelwa kuzimele zesithombe ezihlakaniphile ze-Nest Hub njengengxenye yesibuyekezo sokuhlola samalungu ohlelo lwe-Google Preview.
Kushiwo ukuthi uma ngesikhathi sokuhlolwa kungenazinkinga okungalindelekile, okususelwa ku-firmware I-Fuchsia izosetshenziswa kumadivayisi wabanye abasebenzisi be-Nest Hub, ongeke abone umehluko, ngoba isikhombimsebenzisi esakhiwe ngesisekelo sohlaka lwe-Flutter sizohlala sinjalo. Izingxenye ezisezingeni eliphansi kuphela zohlelo lokusebenza ezizoshintsha.
Ngaphambilini, amadivayisi weGoogle Nest Hub abekhishwa kusukela ngo-2018, ahlanganisa imisebenzi yohlaka lwesithombe, uhlelo lwe-multimedia kanye ne-interface yokulawulwa kwekhaya elihlakaniphile, i-firmware esetshenzisiwe ngokususelwa ku-Cast shell ne-Linux kernel.
Masikhumbule ukuthi ngaphakathi kohlaka lwephrojekthi yeFuchsia, iGoogle ibisungula uhlelo lokusebenza jikelele Kusukela ngo-2016 ingasebenza kunoma yiluphi uhlobo lwedivayisi, kusukela eziteshini zokusebenza nakuma-Smartphones kuya kubuchwepheshe obushumekiwe nobathengi. Ukuthuthukiswa kwenziwa ngokucabangela isipiliyoni sokwenza ipulatifomu ye-Android futhi kucatshangelwa ukushiyeka emkhakheni wokukala nokuphepha.
Uhlelo kusekelwe Zircon microkernel, ngokuya ngentuthuko yephrojekthi ye-LK, enwetshelwe ukusetshenziswa ezigabeni ezahlukahlukene zamadivayisi, kufaka phakathi ama-Smartphones kanye namakhompyutha wakho uqobo. I-Zircon inweba i-LK ngokusekelwa kwemitapo yolwazi kanye nezinqubo ezabiwe, izinga lomsebenzisi, ukuphatha izinto nemodeli yezokuphepha ngokuya ngamakhono. Abashayeli basetshenziswa njengemitapo yolwazi enamandla yomsebenzisi elayishwe inqubo ye-devhost futhi iphethwe ngumphathi wedivayisi (i-devmg, iDivayisi Manager).
KwiFuchsia ithuthukise isikhombimsebenzisi sayo esibonakalayo esibhalwe ngolimi lwe-Dart, kusetshenziswa uhlaka lweFlutter. Le phrojekthi iphinde ithuthukise uhlaka lwePeridot UI, umphathi wephakheji yeFargo, umtapo wolwazi ojwayelekile we-libc, uhlelo lokunikezela nge-Escher, umshayeli weMagma Vulkan, umphathi we-composite, iMinFS, iMemFS, iThinFS (i-FAT ngolimi lweGo) nezinhlelo zefayela leBlobbs, kanye nokwahlukaniswa kwe-FVM. Ibuye ikuvumele ukuthi wakhe izinhlelo zokusebenza zeselula ze-iOS ne-Android. Ukunikezwa kwenziwa yingxenye ye-Escher, esebenza nge-Vulkan graph API.
Imvelo yomsebenzisi ihlukaniswe izingxenye ezimbili: i-Armadillo ne-Armadillo User Shell. I-Armadillo uhlelo lokusebenza oluphathekayo olungasebenza kunoma iyiphi iplatifomu ehambelana neFlutter, kufaka phakathi i-Android ne-iOS (umhlangano wedemo ulungiselelwe ngendlela yefayela le-APK le-Android, likuvumela ukuthi uhlole isikhombimsebenzisi ngaphandle kokufaka iFuchsia). I-Armadillo User Shell iyisixhumanisi kuhlelo lokusebenza lwe-Armadillo olunikezela ngamathuluzi wokuxhumana nezinsizakalo ze-Fuchsia ngokusebenzisa izixhumi ze-FIDL nokuhlela imvelo yomsebenzisi ezingxenyeni zohlelo lwe-Fuchsia OS.
Ngokuthuthukiswa kohlelo lokusebenza, ukusekelwa kwe-C / C ++, i-Dart iyanikezwa, iRust nayo iyavunyelwa ezingxenyeni zohlelo, kusitaki senethiwekhi: Ve nakuhlelo lokwakha lolimi lwePython.
Inqubo ye-boot isebenzisa umphathi wohlelo, ofaka i-appmgr ukudala imvelo yokuqala yesoftware, i-sysmgr ukudala imvelo ye-boot, kanye ne-basemgr ukulungisa imvelo yomsebenzisi nokuhlela ukungena ngemvume.
Ukuqinisekisa ukuphepha, kuhlongozwa uhlelo lokuhlukaniswa kwe-sandbox oluthuthukile, lapho izinqubo ezintsha zingafinyeleli ezintweni ze-kernel, azikwazi ukwaba inkumbulo, futhi azikwazi ukwenza ikhodi, futhi kusetshenziswa uhlelo lwe-namespace ukufinyelela izinsizakusebenza, ezinquma izimvume ezitholakalayo. Ipulatifomu inikezela ngohlaka lokwakha izinto, okuyizinhlelo ezisebenza ku-sandbox yakho futhi ezingasebenzisana nezinye izinto nge-IPC.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » I-Fuchsia OS isiqalile ukukhipha amadivayisi we-Nest Hub